Healthy Habit – Page 29 – Healthy Life Journal
———-၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— (၁) အနေအထားမှန်ပါစေ မတ်တပ်ရပ်တာ၊ လမ်းလျှောက်တာ၊ ထိုင်တာ၊ ပစ္စည်းသယ်မတာနဲ့ လှဲလျောင်းအနားယူတာတွေကို လုပ်ဆောင်ရာမှာ အနေအထားမှန်မှန်နေပါ။ ဒါမှသာ ကျောရိုးကို ထောက်ပံ့ထားတဲ့ ကြွက်သားတွေနဲ့ တွယ်ဆက်မျှင်တွေအပေါ် ဒဏ်သက်ရောက်မှုနည်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) သန်စွမ်းမှုအဆင့် မြင့်မားပါစေ...
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့်အရာ ၁၀ မျိုး
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ခန္ဓာကိုယ်စမတ်ကျပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေစေဖို့အတွက် သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေဟာ သင်နဲ့လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအရာတွေကို အသုံးချပြီး အစားအသောက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် စားတတ်အောင်၊ လေ့ကျင့်ခန်းကောင်းကောင်း လုပ်ဖြစ်အောင်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် စမတ်ကျလှပနေအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ (၁) တေးဂီတဆိုတာ...
အသက် ၁၁၄ နှစ်အရွယ် အဘိုးမျှဝေထားသည့် သူ့ကိုအသက်ရှည်စေသော အစာငါးမျိုးအကြောင်း
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပျမ်းမျှလူ့သက်တမ်းဟာ ၇၂ နှစ်ဝန်းကျင်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာ လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ရင်း အသက် ၁၁၄ နှစ်အထိ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အဘိုးဘာနန်ဒိုရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။...
လေ့ကျင့်ခန်းကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ လုပ်သင့်သလဲ . . .
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့သူဖြစ်ရင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ လူအများစုက တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ နဲ့ တစ်ပတ်မှာ ငါးကြိမ်ခန့် အသင့်အတင့် ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ ခပ်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်တာလို လေ့ကျင့်ခန်းကို ၁၀-၁၅ မိနစ်နဲ့...
ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်မသိမ်းသင့်သည့် အစားအသောက်များ
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လူတွေက အစားအသောက်တွေကို သိမ်းဆည်းဖို့ ရေခဲသေတ္တာကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်မသိမ်းသင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေဆိုပြီး သီးသန့်ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေ ထည့်လိုက်ရင် ရေခဲသေတ္တာထဲက တခြားအစားအသောက်တွေကို ပိုဆိုးစေတာနဲ့ ထိခိုက်စေတာတို့ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။ (၁)...
Q. ညီမ လက်အနောက်ဘက် ကျော်ဘက်က အရမ်းနာနေလို့။ ကျောဘက်ပါနာတာ ၇ လရှိပါပြီ။ ဆေးခန်းပြလည်း မသက်သာလို့။ SL(FB) A. ကျောပြင်နာတယ်၊ ဆရာဝန်လည်း ပြပြီးပြီဆိုတော့ အဆုတ်ကိုစစ်ဆေးပြီးပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ ကျောပြင်က ကြွက်သားနဲ့ အာရုံကြောတွေကြောင့်နာတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။...
အသည်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာ မထိခိုက်အောင် နေထိုင်စားသောက်နည်း
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. အသည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို သိချင်ပါတယ်။ အသည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ မထိခိုက်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်သင့်ပါသလဲ။ Maylay(FB) A. အသည်းကတော့ သည်းခြေရည်ကို စစ်ထုတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က စားသောက်လိုက်တဲ့...
ည ညအိပ်ရေးဝ၀ အိပ်စက်နိုင်စေဖို့ တစ်နေ့တာအတွင်း ဘာတွေ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— တစ်နေ့လုံး သင်လုပ်ဆောင်တဲ့ အရာတွေဟာ ညဘက်မှာ အိပ်ရေးဝ၀အိပ်စက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝနရီနဲ့ အိပ်စက်မှုဟာ ဆက်စပ်မှုရှိနေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်စက်နိုင်စေဖို့ ဇီဝနရီအလိုက် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ နံနက်ခင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝနာရီကို...